Jose Mourinho Oo Soo Jeediyay In Barcelona Ay Dooneysay Inay La Wareegto Pepe - jornalizem
Jose Mourinho Oo Soo Jeediyay In Barcelona Ay Dooneysay Inay La Wareegto Pepe
Tababaraha kooxda Real Madrid Jose Mourinho ayaa si maldahan u sheegay in Barcelona ay dooneysay inay la soo wareegto daafaca Merengues Pepe.
Tababarihii hore ee Chelsea ayaa shirkiisa jaraa’id ee maanta ee ka horeeya kulanka ay berri la ciyaarayaan Celta Vigo, waxaa wax laga weydiiyay wararka la isla dhexmarayo ee soo jeedinaya in Barcelona ay video ka sameysay qaladaadka uu Pepe ku galay ciyaartoydooda.
Mourinho ayaa sheegay inay jireen labo kooxood oo doonayay Pepe markii uu heshiiska u cusbooneysiinayay Madrid, islamarkaana ay macquul tahay in koox ka mid ah ay sameysay video-gaas si ay u dhiraandhiriyaan qaab ciyaareedkiisa.
“Waxba kama ogi video-gaas ku saabsan Pepe. Waxaan ogahay markii uu qandaraaska inoo cusbooneysiinayay inay jireen labo kooxood oo ku riixayay inuusan heshiis cusub inoo saxiixin. Ma aqaano haddii mid ka mid ah kooxahaas ay tahay kooxdii video-ga sameysay” ayuu yiri Special One.
Dhanka kale In aan ka yareyn todoba ciyaaryahan ayaa ku soo laabatay garoonka tababar Madrid iyagoo dhaawacyo kala duwan ka soo qaaday ciyaarihii caalamiga, iyadoo Marcelo, Fabio Coentrao, Raphael Varane iyo Alvaro Arbeloa ay dhamaantood seegi doonaan kulanka Celta Vigo.